Nentin'ny havany novonjena teny amin’ny hopitaly Andranomadio izy ireo, saingy teny an-dalana dia tsy tana ny ain'ilay tovovavy iray ary avotra kosa ilay iray hafa. Poizim-boalavo no namonoan'izy ireo tena, raha ny fanamarihana vonjimaika nataon’ny mpitsabo. Ankoatra an'io dia re ihany koa fa nisy lehilahy iray hafa namono tena ny alatsinainy teo, ka fanodinkodinam-bola 30 tapitrisa ariary tamina banky iray no antony nanaovany izany, raha ny vaovao azo. Avotra ny ainy ary mbola manaraka fitsaboana, raha ny fampitam-baovao hatrany. Olona telo samihafa izany no indray namono tena tao Antsirabe tamin’ity fiandohan’ny herinandro ity.